Ajụjụ - SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ ụlọ ọrụ gị?
Nke mbụ bụ ndị mmadụ. Anyị bụ ndị otu ọkachamara na ndị ọrụ injinia na ụlọ ọrụ a. Onye isi anyị nwetara ogo ya na UK nke na-eweta ụlọ ọrụ a mba ụwa karịa ndị na-emepụta ụlọ elu ndị ọzọ. Nke abuo bu oru, maka ngwa ahia a, ndi na emeputa ya na ndi ahia kwesiri ikwurita banyere otutu ihe omuma. Anyị na-enwe ndidi mgbe niile ịjụ ajụjụ ọ bụla ma nye ndị ahịa ahịa ndụmọdụ anyị. Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, anyị ji àgwà ahụ kpọrọ ihe nke ukwuu. Ihe ọ bụla ndị ahịa chọrọ ga-ezute ma anyị nyefere inye ndị ahịa anyị ngwaahịa niile.
Ego ole bụ ụlọ elu？
Ọnụahịa ahụ na-adabere n'ụdị ụdị elu ị chọrọ. Maka ụdị ụlọ elu dị iche iche, akụrụngwa nwere ike ịdị iche na ọrụ ụgha nke ụfọdụ ụdị ụlọ elu nwere ike ịdị mgbagwoju anya karịa ndị ọzọ. Nke a bụ ihe kpatara anyị ji chọọ ịbịaru ndị ahịa wee kwupụta nkwupụta.
Kedu maka ma ọ bụrụ na enweghị m eserese ọ bụla?
Ọ bụrụ na ndị ahịa enweghị ịbịaru, anyị nwere ike ịnye ọtụtụ ụdị ụlọ elu maka ndị ahịa ịhọrọ. N'ọtụtụ oge, anyị nwere ike ịnye ụdị ụlọ elu kwesịrị ekwesị iji zute ihe ndị ahịa chọrọ. Ọ bụrụ na nnyefe ahịrị dị mgbagwoju anya, anyị ka na-enye ndị ahịa anyị ọrụ imewe.
ihe kacha nta iji?
Anyị enweghị obere iwu ma anyị na-anabata iwu ọ bụla sitere n'aka ndị ahịa.
Ogologo oge ole ka mmepụta ahụ bụ?
Nọmalị anyị nwere ike ibu mbupu mbụ n'otu ọnwa. Oge imepụta ihe dabere n'ezie ụlọ elu ole ịchọrọ.
Ogologo oge ole bụ ụbọchị mbupu?
Oge nnyefe a na Europe, Africa na mpaghara America bụ ihe dị ka ụbọchị 40. Iji kwuo nke ASEN, oge nnyefe dị ihe dị ka ụbọchị 30. N'ikwu okwu n'ozuzu, oge nnyefe ga-aka karịa otu ọnwa.
Ndị ahịa ha enwere ike inyocha ngwaahịa ha tupu ebufere ha?
Ee n'ezie. Ndị ahịa nwere ike inyocha ngwaahịa ha n'oge ọ bụla ha chọrọ. N'ezie, anyị na-anabata ndị ahịa ileta ụlọ ọrụ anyị ma nyochaa ngwaahịa ha tupu ebufere ha. Anyị ga-enye ndị ahịa 3 ụlọ obibi ụbọchị 3. Ndị nlekọta ga-enwe nzukọ na ndị ahịa na-eleta anyị. A ga-enyocha nyocha ọ bụla nke ngwaahịa ndị ahịa chọrọ.
Gịnị bụ gị mgbe-ire iwu?
N'ikwu okwu n'ozuzu, anyị ga-enye ọrụ ọ bụla anyị nwere ike iji nyere ndị ahịa aka ruo mgbe a gbakọtara ụlọ elu nke ọma.
Gini bu ugwo ugwo gi?
Nọmalị anyị na-anabata T / T na L / C, 30% n'ọdịnihu.